Linux zvishandiso zvekuvandudza kugadzirwa kubasa | Linux Vakapindwa muropa
Linux zvishandiso zvekuvandudza kugadzirwa kubasa
Kana uri kubata basa, zvirokwazvo uchave unofarira kuziva mamwe maLinux maapplication ayo anogona kukubatsira iwe kuvandudza kugadzirwa. Paunoshanda uchibva kumba, une zvakawanda zvinyaradzo asi, kazhinji, vamwe vanhu vanowanzo shanda maawa akareba kupfuura zvavaizoshanda muhofisi. Naizvozvo, iwe unogona kushandisa iyi mhando ye software kugadzirisa basa rako uye nekukubatsira iwe kuwana imwe nguva yekuzorora.
Pano iwe unogona kuwana mamwe maitiro akanaka uye masutu ekuti uite basa rako rezuva nezuva, riite nenzira yakanakisa, uye kunatsiridza zvibereko. Mamwe emapurojekiti aya iwe uchatoziva, vamwe pamwe kwete, uye iwe wapedza yakawanda nguva uchiita zvimwe zvinhu mu "manual" kana analog nzira usingazive kuti kune mhinduro dzayo ...
ari maturusi akanakisa kunatsiridza kugadzirwa mumabasa ako ndeiyi:
GnuCash: kuti uchengetedze accounting yako uye zvemari zvirinani, unogona kuzvibatsira kubva kune ino GNU chirongwa. Iyo software yakagadzirirwa kuti idzi kuverenga uye maitiro hazvisi zvinogumbura. Iwe unozogona kuita ese kuverenga, chengeta zvinyorwa, zvakarongwa kutengeserana, chati yemacount, kuteedzera kwevatengi, vatengesi, mabasa, kubhadharisa, kubhadhara mavovoice, mitero, nezvimwe.
ProjectLibrePaunenge uine chirongwa chekutarisira, unogona kushandisa iyi imwe chirongwa kuronga zvese zvaunoda kuti uve nechokwadi chekubudirira. Mune mamwe mazwi, iri imwe nzira yeMicrosoft Project. Anwendung inogadzira Gantt machati, maneti dhizaini, yakawana kukosha kwemitengo, zviwanikwa histograms, basa rekuparadza chimiro dhizaini, nezvimwe.
Gnotime: Kana iwe uchitova nenhamba yakanaka yekushandisa muhofisi, senge mahofisi masutu, edhita yemifananidzo, manejimendi manejimendi, accounting, nezvimwe, zvirokwazvo iwe unoda kuwedzera app kune yako runyorwa kuteedzera iyo nguva yakashandiswa pane yega yega basa iwe yaunoita rako basa, uye nekudaro zvirinani manejimendi kuti unopa zvakadii kuchinhu chimwe nechimwe. Uye zvakare, iwe unozogona kuongorora kana iwe ukanyatsoshandisa nguva yakakwana pazvinhu zvakakosha zvikuru kana ukazvitambisa pane zvimwe zvisina basa.
LastPass: kana iwe uri kushanda kubva kumba, chimwe chezvinhu chinogona kudzikisira kugadzirwa kwako inyaya yekuti unogara uchirangarira mapassword nekuaisa iwo mumaemail ako, kuti uwane mapuratifomu emakambani, masevhisi ebhengi, nezvimwe. Saka kuti iri harisi dambudziko, unogona kushandisa password maneja uko iwe kwaunogona kuisa ese mapassword aunazvo uye kuti haachave dambudziko ...
Xiki: Vese avo vanowanzo shandisa tambo yekuraira, zvirokwazvo ivo vanoda chimwe chinhu chinopa zvakawanda kwavari, chinoita kuti hupenyu hurerukire goko (bash, zsh, csh, ...). Neprojekti iyi iwe unokwanisa kuwedzera masimba.
Zim: kana iwe uchida kuve nezvose zviri pasi pesimba ruzivo rwese rwunodiwa kuchirongwa chako, unogona kushandisa ino Wiki mupepeti mune graphical modhi, mwenje, uye iyo yaunogona kubata zvese zvinyorwa nemifananidzo. Unogona kutarisa kuperetera, kuita kuverenga, kugadzira makarenda, kugadzira HTML kutumira online, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux zvishandiso zvekuvandudza kugadzirwa kubasa
Cesar Chavez akadaro
Pindura kuna Cesar Chavez
yay: maitiro ekuisa iyi AUR wizard paArch Linux based distros
Motionbox: chaiyo yakasarudzika vhidhiyo browser ...